11 / 11 / 2017 10 / 11 / 2017 ဒံယလေက 2099 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၅၂၉၀ Mos Eisley Cantina, ၇၆၃၈၆ Hogwarts အမြန်, 70180, 70180 Metalbeard ရဲ့ပင်လယ်နွား, 71040, 71040 Disney ရဲတိုက်, Hoth အပေါ် 75098 Assault, 76023 အဆိုပါ Tumbler, 76042 အဆိုပါ Shield Helicarrier, 76052 Batman Classic တီဗီစီးရီး Batcave, 7753 ခိုးကူး Tank, အာဒံအနောက်, Batcave, Batman, DC ကသူရဲကောင်းများ, Disney, Disney ရဲတိုက်, ဂယ်ဒို, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Helicarrier, Hogwarts အမြန်, ဂျိုကာ, Lego, Lego, DC စူပါသူရဲကောင်းများ, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Star Wars, Luna ချစ်စရာကောင်းတဲ့, မာရီယာဟေးလ်, Queasy Kitty, Snoke, Star Wars, Star Wars: နောက်ဆုံး Jedi, အဓိပတိခေါင်းဆောင် Snoke, The Dark Knight ဟာ, နောက်ဆုံး Jedi, အဆိုပါ Lego ရုပ်ရှင်, Tinker ဘဲလ်, Tinker ဘဲလ်, Toryn Farr, မင်္ဂလာပါ
ထိုအဖြစ် Lego အုပ်စုသည်အသေးစားပုံစံများကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ကုမ္ပဏီသည်အချို့သောကိန်းဂဏန်းများကိုရရှိရန်ခက်ခဲသည် (သို့မဟုတ်စျေးကြီးသည်) လုပ်သည်။
ငါကလေးဘဝတုန်းကသေးငယ်တဲ့ပုံစံတွေကအသုံးဝင်တယ် - အာကာသယာဉ်တွေလေယာဉ်မှူးတွေလိုတယ်၊ ပင်လယ်ရေယာဉ်တွေမှာဗိုလ်ကြီးတွေလိုတယ်၊ ရဲတိုက်တွေလည်းလိုတယ်။ Pirates တွေမလာမချင်းပုံတစ်ပုံချင်းစီမှာတူညီတဲ့မျက်နှာရှိတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှပင်မျက်နှာအားလုံးသည်ယေဘူယျအားဖြင့်ရှိသည်။ ထို့နောက်လာ၏ Star Warsများစွာသောအစုံ၏ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုလုံးဖြစ်လာခြင်းနှင့်လိုင်စင်ချခြင်း၊ မဆိုပါးရည်နပ်ရည်ကုမ္ပဏီလိုပဲ, အလိုရှိ၏ Lego ပရိသတ်များအနေဖြင့်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအသေးစားရုပ်ပုံများရရှိရန်ပရိသတ်များအနေဖြင့်၎င်းတို့မှအခြားတစ်ဖက်သို့ကျော်သွားနိုင်သည့်အစုံများကိုမကြာခဏဝယ်ယူလေ့ရှိကြသည်။
Comic Con သီးသန့်သီးသန့်နှင့်အခြားအကန့်အသတ်ရှိသောထုတ်ကုန်များမပါ ၀ င်ပါကသင်တန်းသည်အခြားအဆင့်အထိစိတ်ပျက်စရာကောင်းမည်၊
ထံမှအဓိပတိခေါင်းဆောင် Snoke 75190 ပထမ ဦး ဆုံးအမိန့်စတား ​​Destroyer
ဆွဲဆောင်မှုအသေးအဖွဲပြproblemနာ၏လတ်တလောသာဓကမှာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောခေါင်းဆောင်ချုပ် Snoke ပါဝင်ခြင်းဖြစ်သည် 75190 ပထမ ဦး ဆုံးအမိန့်စတား ​​Destroyerတစ်£ 129.99 set ကို။ ၎င်းသည်ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည် Star Wars သူကရုပ်ရှင်၏နောက်ဆက်တွဲ trilogy ပာမှလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောမကောင်းမှုကြီးတစ်ခုလိုချင်သည်။ သို့သော်လူတိုင်းသည် Star Destroyer အသစ်တစ်ခုကိုလိုချင်ပါသလား။ ဖြစ်ကောင်းမဟုတ်, ဒါပေမယ့် Snoke ချင်သောသူတို့အားတစ် ဦး တည်းသာအစုံရှိသည်သူတို့သူ့ကိုဝင်နိုင်ပါတယ်။
အာဒံအနောက် Batman မှ 76052 Batman Classic တီဗီစီးရီး - Batcave
အချို့သောအသက်အရွယ်ရှိပရိသတ်များသည်ဤဇာတ်ကောင်နှင့်လွန်ခဲ့သောခေတ်မှစခန်းချတီဗီရှိုးများကိုအမှတ်ရနှစ်သက်ကြသည်။ အားလုံးစုဆောင်းရန်ထွက်သွားကြသူငယ်ရွယ်ရှေးရှေးတွေအများကြီးလည်းရှိပါတယ် Batman နှစ်ပေါင်းများစွာမှတဆင့်ဖြန့်ချိခဲ့သေးသောအသေးစား။ ဒီကိုနေရာချ classic ပေါင် ၂၃၉.၉၉ တစ်ခုတည်းတွင်တွက်ချက်မှုသည်၎င်းကိုအမှန်တကယ်ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာကတိက ၀ တ်ပြုခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။
4501 Mos Eisley Cantina မှ Greedo
သူဟာစျေးကြီးတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူပါဝင်တဲ့မော်ဒယ်ဟာပေါင် ၂၇.၉၉ လောက်ပဲရှိသေးတယ်၊ ၂၀၀၄ မှာစင်ပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပါ။ Lego နောက်ထပ် ၁၀ နှစ်ထပ်မံထုတ်လုပ်ရန်အတွက် Group မှမထုတ်ပြန်ခဲ့ပါ။ Lego Star Wars သူဟာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာပြန်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဂျင်ဒါနာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီအစုဟာတော်တော်လေးအခြေခံကျပါတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီဇာတ်ကောင်မိတ္တူအနည်းငယ်ထဲကတစ်ယောက်ကိုသူဝယ်ယူလိုက်တာဟာသူ့ကိုလိုချင်သူတွေအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ပါဘူး။
4841 Hogw ထံမှ Luna Lovegoodarts အမြန်
Luna Lovegood သည်အလွန်သေးငယ်သောစိတ်ဆင်းရဲမှု၏မုန်တိုင်းကြီးဖြစ်သည်။ သူမသည်၏နောက်ဆုံးလှိုင်း၌လာ၏ ဟယ်ရီပေါ်တာ ရှစ်ရုပ်ရှင်စီးရီးရဲ့အဆုံးမှာဖြန့်ချိခဲ့ set ။ ဆိုလိုသည်မှာအစောပိုင်းနှစ်များကကဲ့သို့ကလေးများသည်အစုံလိုက်ဝယ်ယူသူမများပါ။ ဇာတ်ကောင်တစ်မျိုးတည်းသာထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးသူမ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာပေါင် ၈၁.၉၉ ပါရှိသည်။ နောက်ဆုံးရုပ်ရှင်များတွင်အလွန်လူကြိုက်များသောဇာတ်ကောင်တစ် ဦး အနေဖြင့်သူမကိုနှစ်သက်သောပရိသတ်များစွာရှိခဲ့သဖြင့်၊ စျေးကွက်တက်ခြင်းနှင့်အသေးစားရုပ်ပုံများကိုစုဆောင်းခြင်းသို့မထည့်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
မှ Tinker ဘဲလ် 71040 Disney ရဲတိုက်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကန့် Disney ရဲတိုက် အကယ်၍ ပေါင် ၂၉၉.၉၉ ဈေးနှုန်းမတတ်နိုင်သောစုဆောင်းသူများအတွက်ကံကောင်းထောက်မစွာပင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံးအစုံအလင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စုဆောင်းထားသောအသေးစား Tinker Bell မှလွဲ၍ မျဉ်းကြောင်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများရှိသော်ငြားထည့်သွင်းထားသောစာလုံးများ၏ဗားရှင်းများပါ ၀ င်သည်။ မျိုးဆက်များအတွက်မီဒီယာတိုက်တေနီုမှထုတ်လုပ်သည့်ဤမျှလောက်များစွာသောအစတွင်ရဲတိုက်ကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့သည့်အလွန်အမင်းနှစ်သက်ဖွယ်အသေးအဖွဲရုပ်ပုံများသာရှိသေးသည်မှာ 71040.
ထံမှ Toryn Farr Hoth အပေါ် 75098 Assault
မများဘူး Lego Star Wars Theory အင်ပါယာရှိ 'standby ion control' ဟုခေါ်ဆိုသောသူပုန် Toryn Farr အားတောင်းဆိုရန်ပရိသတ်များကတောင်းဆိုကြသည်။ သူမသည်ထင်ရှားကျော်ကြားသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည် Hoth အပေါ် 75098 Assault။ minifigure ပုံစံတွင်ပေါ်လာသောအမည်ရှိဇာတ်ကောင်တိုင်းအနည်းဆုံးမူကွဲတစ်ခုရှိရန်ရှာသောစုဆောင်းသူများစွာရှိပြီးသူမသည်သူမရှိရန်လိုအပ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်သူမသည်အလွန်စျေးကြီးသောနေရာတွင်ရှိနေပြီးနောက်စျေးကွက်အတွက်တန်ဖိုးကောင်းသည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလည်းမဟုတ်ခဲ့ပါ။ Toryn Farr သည်မမေ့နိုင်စရာဖြစ်သော်လည်းသူမသည်ဈေးပေါပေါလာသည်ဟုမဆိုလိုပါ။
ထံမှမာရီယာဟေးလ် 76042 အဆိုပါ Shield Helicarrier
မာရီယာဟေးလ်သည်ပရိတ်သတ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည် Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ပါဝင်သည်သည်အခြားနှစ်လိုဖွယ်ဇာတ်ကောင်များနှင့်မတူဘဲ 76042သူမကအခြားမည်သည့်အစု၌ထင်ရှားဘူး။ ဒါ့အပြင် SHIELD Helicarrier ဟာထူးဆန်းစွာချုံ့ချဲ့မှုကြောင့်ချစ်သူရဆုံးပုံစံမဟုတ်ပါ။ ပေါင်စတာလင် ၂၇၉.၉၉ ကျော်ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့သင်ဟာသူတို့ထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်မြန်မြန်လုပ်သင့်သည်။ The Lego အဖွဲ့အနေဖြင့်မကြာမီအနားယူတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
7753 Pirate Tank မှ Hondo Ohnaka
စျေးနှုန်းမှာပေါင် ၃၄.၉၉ ဖြစ်ပြီး ၇၇၅၃ တွင်ပြtheနာရှိနေသည်။ Hondo Ohnaka ကိုရှာဖွေရာတွင်ပြsuchနာမှာထိုကဲ့သို့သောပြန့်နှံ့နေသောဇာတ်ကောင်တစ်ခုတည်းတွင်သာပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ The Clone Wars နှင့်ယခုသူပုန်များအပြည့်အ ၀ ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြသောသူများသည် Hondo ကိုနှစ် ဦး နှစ်ဖက်ပျော်ရွှင်စွာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားတတ်သည့်ကြေးစားသူအဖြစ်ကောင်းစွာသိထားကြသည်။ သူ၏ပျံ့နှံ့မှုကသူသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကမေ့မရသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုတွင်သာအနည်းငယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုသာပေါ်ပေါက်စေခဲ့သည်။
76023 The Tumbler မှ Dark Knight Joker
လူအများက The Dark Knight ရှိ Heath Ledger ၏စွမ်းဆောင်ချက်သည် Joker ကိုပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်သည်ဟုယူမှတ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်သူ၏ပလပ်စတစ်အုတ်၏လူ့ဇာတိသည်စတာလင်ပေါင် ၁၅၉၉.၉၉ တွင်တစ် ဦး တည်းသာပါ ၀ င်ခြင်းကြောင့်စုဆောင်းသူများကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်ဆက်လက်မြင့်မားသောပုံရိပ်ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်၏မှောင်မိုက်သောသဘောသဘာဝကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းသည်အလွန်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည် Lego အုပ်စုသည်ထိုကဲ့သို့သောပုံပန်းသဏ္ဌာန်မျိုးကိုလိုလိုလားလားရှိသော်လည်းပရိသတ်များကသူတို့လုပ်ခဲ့သည့်အတွက် ၀ မ်းသာကြသည်။
70180 Metalbeard ရဲ့ပင်လယ်နွားထံမှ Queasy Kitty
Unikitty ဟာ The Theraps ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေထဲကတစ်ခုပါ Lego ရုပ်ရှင်သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်အံ့အားသင့်စရာကောင်းသည့်အရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ စုဆောင်းသူအမြောက်အများသည်အစကန ဦး တွင်ပျော်စရာကောင်းသော၊ ထို့နောက် 2014 Metalbeard's Sea Cow သည်လာပြီးထိုတာ ၀ န်ကိုထမ်းဆောင်သူများအတွက်နာကျင်မှုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ ဇာတ်ကောင်ဗားရှင်းများစွာကိုစျေးသိပ်မကြီးတဲ့အစုံများမှာတွေ့နိုင်ပေမယ့်အဓိကဇာတ်ကောင်ရဲ့အဓိကအချက်ကပေါင် ၁၆၉.၉၉ ပါ။
ရရန်ခဲယဉ်းသောအခြားများစွာသောများနှင့်နှစ်လိုဖွယ် minifigures ထွက်ရှိပါတယ်။ ဘယ်ဟာတွေကိုသင်လိုက်ရှာဖို့ဒါမှမဟုတ်လက်တစ်ဖက်နဲ့ခြေထောက်ပေးဖို့လိုသလဲ။ မှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ Facebook က or တွစ်တာ.
← ဒီတနင်္ဂနွေအမျိုးသားမီးရထားပြတိုက်တွင် LEGO ပန်ကာအဖြစ်အပျက်
LEGO NEXO KNIGHTS 2018 အစုံကို US Toys R Us တွင်တွေ့ရှိသည် →